सम्पूर्ण पवित्र बाइबलको माध्यमबाट निर्देशित अध्ययन
नयाँ करारको शुरुवातबाट शुरू भएर पूर्ण बाइबलको माध्यमबाट एक शैक्षिक यात्राको महशुस गर्नुहोस् । तपाईं बाइबल प्रथम पटक पढ्दै हुनुहुन्छ वा यसको अनुभवी पाठक हुनुहुन्छ थ्रु द स्कप्चर्स अनलाइन विद्यालय एक उत्तम बाइबलीय अध्ययन गर्ने स्थान हो । हाम्रा कोर्सहरूले तपाईंलाई बाइबलका प्रत्येक पुस्तकको गम्भीर अध्ययन प्रदान गर्नेछन् र हामी यसो गर्दा हामी प्रत्येक श्लोकको ऐतिहासिक पृष्टभूमि, सन्दर्भ तथा अन्य कुराहरू हेर्छौं । थ्रु द स्कप्चर्स एक पटकमा एउटा कोर्स लिने हिसावले निर्माण गरिएका हुन्छन् । तपाईंले प्रत्येक कोर्स पूरा गरेपछि पढ्दै अगाडि जाँदा तपाईंलाई छुट्टै रकम तिरेर पढ्नु पर्ने अर्को कोर्स प्रश्ताव गरिन्छ ।
थ्रु द स्कप्चर्स अनलाइन विद्यालयले सिकाइको संरचित तालिक प्रदान गर्नुका साथै तपाईंलाई आफ्नै गतिमा अध्ययन गर्न सक्षम बनाउँछ । यो सबै पठन स्तरका लागि उपयोगी छ!
आफ्नो प्रगति हेर्नुहोस्
प्रत्येक चरण पूरा भए सँगै आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट बढ्दा आफ्नो श्रमको फल हेर्नुहोस् । कोर्सका विशेष समूहहरू सकेपछि तपाईंलाई उपलब्धीको प्रमाणपत्रहरू प्रदान गरिनेछ ।
सिफारिस गरिएका कोर्सहरू तालिकाहरू
तपाईंलाई प्रत्येक कोर्स पूरा गर्ने ५० दिन दिइनेछ । तपाईंलाई अधिक समय चाहिएमा तपाईं आफ्नो कोर्स सधैं अतिरिक्त ३० दिन बढाउन सक्नुहुन्छ ।
तपाईं अझै चाडो अघि बढ्न चाहनु हुन्छ भने तपाईंले पूरै 50 दिनमा यो कोर्स पूरा गर्नु पर्छ भन्ने होइन । तपाईं आफ्नो गति आफै तोक्न तथा आफूले चाहेको जुन सुकै बेला पनि शुरू गर्न सक्नुहुन्छ । विविध तालिकाहरूलाई निम्नानुसार सिफारिस गरिएको छ । तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो आवश्यकता अनुरूप अनुकुलन गर्न सक्नुहुन्छ ।
मध्यम गतिक्रमसुस्त गतिक्रम – त्रैमासिक रूपमातिव्र गतिक्रम – त्रैमासिक रूपमातिव्र गतिक्रममध्यम गतिक्रम – त्रैमासिक रूपमासुस्त गतिक्रम
प्रति पाठ्यक्रम २८ दिन
मध्यम गतिक्रम अध्ययनका लागि अलि धेरै समय दिन सक्ने व्यक्तिको लागि तयरा गरिएको हो । यो लगभग पार्ट टाइम कलेज विद्यार्थीले चल्नु पर्ने गतिक्रम बराबरको छ । तिन वटा मात्र पाठ्यक्रम समेटिएको ग्रीस्मकालिन सेमेस्टरमा शरद र बसन्त सेमेस्टर भन्दा अलिकति बेसी भार पर्छ र यसले अर्को वर्ष सुरु हुनु अगाडी १ महिनाको छुट्टी उपलब्ध गराउन सक्छ ।
सुस्त गतिक्रम – त्रैमासिक रूपमा
प्रति पाठ्यक्रम ४२ दिन
सुस्त गतिक्रमको तालिका त्रैमासिक तालिका अनुसार बाइबल कक्षा सञ्चालन गर्ने मण्डलीको लागि तयार गरिएको हो । प्रत्येक पाठ्यक्रममा ६ वटा साप्ताहिक सामूहिक बैठक गर्न सकिनेछ । बैठकमा विद्याथ्रीहरूले अध्ययनको प्रत्येक खण्डको मुख्य विषयहरूका बारेमा छलफल गर्न सक्छन् भने सबै विद्यार्थीहरूले विस्तृत अध्ययन व्यक्तिगत रूपमा कक्षा बाहिर गर्नु पर्नेछ ।
तिव्र गतिक्रम – त्रैमासिक रूपमा
प्रति पाठ्यक्रम १४ दिन
तिव्र गतिक्रमको त्रैमासिक तालिका लगभग पूर्णकालिन कलेज विद्यार्थीले चल्नु पर्ने गतिक्रम बराबरको छ । प्रति पाठ्यक्रम २ हप्ताको दरले चल्ने र त्रैमासिकको बिचमा एक हप्ताको ब्रेक हुने भएकाले यो गतिक्रम एकदम चुनौतीपूर्ण छ । यो पाठ्यक्रम अध्ययनलाई निरन्तरता दिन प्रत्येक दिन धेरै समय खर्च गर्न सक्ने र प्रत्येक दुई दिनमा १०० पृष्ठ र एउटा परीक्षा भ्याउने सक्ने समर्पित विद्यार्थीहरूका लागि हो ।
प्रति पाठ्यक्रम 18 दिन
तिव्र गतिक्रमको त्रैमासिक तालिका लगभग पूर्णकालिन कलेज विद्यार्थीले चल्नु पर्ने गतिक्रम बराबरको छ । यो पाठ्यक्रम अध्ययनलाई निरन्तरता दिन प्रत्येक दिन धेरै समय खर्च गर्न सक्ने र प्रत्येक दुई वा तिन दिनमा १०० पृष्ठ र एउटा परीक्षा भ्याउने सक्ने समर्पित विद्यार्थीहरूका लागि हो ।
मध्यम गतिक्रम – त्रैमासिक रूपमा
मध्यम गतिक्रम अध्ययनका लागि अलि धेरै समय दिन सक्ने व्यक्तिको लागि तयरा गरिएको हो । यो लगभग पार्ट टाइम कलेज विद्यार्थीले चल्नु पर्ने गतिक्रम बराबरको छ । यो गतिक्रम त्रैमासिक रूपमा बाइबल कक्षा सञ्चालन गर्ने मण्डलीको लागि तयार गरिएको हो । प्रत्येक पाठ्यक्रममा ४ वटा साप्ताहिक सामूहिक बैठक गर्न सकिनेछ र विद्यार्थीहरूले बैठकमा अध्ययनको प्रत्येक खण्डको मुख्य विषयहरूका बारेमा छलफल गर्न सक्छन् ।
प्रति पाठ्यक्रम ५० दिन
सुस्त गतिक्रम दैनिक जीवनयापनको लागि पूर्णकालिन दायित्व पूरा गरेर पाठ्यक्रमलाई ५० दिन दिन चाहने व्यक्तिहरूका लागि तयार गरिएको हो । यो गतिक्रमले पाठ्यक्रम सकिन धेरै समय लाग्ने भए पनि यो पाठ्यक्रम रोज्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो अध्ययन पूरा गर्न दीर्घकालीन प्रतिबद्धता राख्न तयार हुनु पर्दछ ।
प्रत्येक कोर्समा तपाईंलाई चाहिने हरेक चिज हुन्छ । तपाईं मूल्यवान डिजिटल पुस्तिका सहितका डाउनलोड गरिएका सामाग्रीहरू कोर्सको अन्त्यपछि राख्न सक्नुहुन्छ ।
विद्यालयमा कुन कुन कोर्सहरू हुन्छन् ?
तपाईंको प्रथम कोर्स “क्राइष्टको जीवन, 1” हुनेछ । “क्राइष्टको जीवन, 1 सकपछि” तपाईंले दोस्रो कोर्स खरिद गर्नुहुनेछ । तपाईंले प्रत्येक कोर्स पूरा गरेपछि पढ्दै अगाडि जाँदा तपाईंलाई छुट्टै रकम तिरेर पढ्नु पर्ने अर्को कोर्स प्रश्ताव गरिन्छ । तल तपाईंले पढ्ने सबै कोर्सहरू तपाईंले लिने क्रममा सूचीकृत गरिएका छन् ्
आजै विद्यालयमा भर्ना हुनुहोस्
र क्राइष्टको जीवन शुरू गर्नुहोस्, 1
आफ्नो प्रथम कोर्समा भर्ना हुनुहोस्